Otu esi emepụta email nwa oge maka PS4 na PS5 wee nwee ọ Playụ PlayStation Plus n'efu | Androidsis
Enweghi afọ ojuju ndị nrụpụta ihe njikwa ihe site n'ịkwụ ngwaahịa ha n'ọnụ ahịa ọla edo, kamakwa iwu a kwụọ ụgwọ ọnwa, otu ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ kwa afọ ka anyị nwee ike iso ndị enyi anyị gwuo egwu na ọtụtụ aha. N'ihe banyere Sony, anyị na -ekwu maka PlayStation Plus.
Inwe ịkwụ ụgwọ ndenye aha iji nwee ike soro ndị enyi anyị na-egwu egwuregwu n'ịntanetị na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ maka njikwa njikwa na ọnụahịa egwuregwu bụ ihe dị naanị na consoles, ebe ọ bụ na ọrụ a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu. ọ dịghị na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ kọmputa.
Ka ndị ọrụ wee hụ aka mbụ ka PlayStation Plus si arụ ọrụ yana uru ọ na-enye anyị, Sony na-enye ndị ọrụ ohere nụ ụtọ ọrụ a ụbọchị iri na anọ n'efu. Ozugbo ụbọchị iri na anọ ahụ agafeela, anyị ga-agaferịrị ee ma ọ bụ ee.
1 Kedu ihe bụ PlayStation Plus
2 Ọ bụghị egwuregwu niile chọrọ PlayStation Plus
3 Ụbọchị 14 nke PlayStation Plus n'efu na ruo mgbe ebighi ebi
4 Nyiwepụta iji mepụta ozi nwa oge maka PS4 / PS5
6 Zụta ndebanye aha PlayStation Plus dị ọnụ ala
Kedu ihe bụ PlayStation Plus
PlayStation Plus na-enye anyị ohere isoro ndị enyi ndị ọzọ kpọọ aha ọtụtụ mmadụ, mana, na mgbakwunye, anyị nwekwara nyepụ kwa ọnwa 2 ma ọ bụ 3 aha n'efu. N'ezie, aha ndị ahụ naanị dị mgbe ejikọtara akaụntụ ejikọtara na ndenye aha. Ọ bụrụ na ọ mechie, egwuregwu anaghịzi adị.
PlayStation Plus dị n'ụdị 3:
Ọnwa 12 maka 59,99 euro
Ọnwa 3 maka 24,99 euro
1 ọnwa maka euro 8,99
Dị ka anyị nwere ike ịhụ, ọnụ ahịa ya na ihe ọ bụla ọzọ na -enuba vidiyo vidiyo dị ka HBO, Disney Plus, Netflix, Apple TV + ... yabụ ị ga -enwerịrị nnukwu ihe na ya, ya bụ, gwuo egwu , ka ọ baara anyị uru ịkwụ ụgwọ ndenye aha, ebe ọ bụ na egwuregwu ndị ha na-enye pụọ bụ achịcha taa, agụụ echi.
Ọ na-enyekwa anyị ego na-adọrọ mmasị iji nweta aha na -adị kwa oge n'efu na Storelọ Ahịa PlayStation. Mgbe niile, anyị nwere ike ịchọta ọdịnaya dịpụrụ adịpụ maka egwuregwu dị ka Fortnite na Apex Legends dị ka akpụkpọ ịchọ mma maka odide, ngwa ọgụ na ihe ndị ọzọ.
Maka aha ndị ahụ niile nke ahụ ha anaghị echekwa data ọganihu na sava ha (Dị ka ọ dị na aha ọtụtụ mmadụ dị ka Fortnite, Apex Legends, Oku ọrụ: Warzone, Rocket League ...) Sony na -enye ndị ọrụ a ihe ruru 100 GB.
Nke a na -enye anyị ohere ịmaliteghachi ihe egwuregwu na console ọ bụla ọzọ nwere otu ID nke etinyekwara egwuregwu ahụ yana hazie ihe njikwa na -enweghị ime nkwado ndabere nke egwuregwu niile anyị chekwara na console.
Otu njirimara bara uru bụ atụmatụ Share Play. Ọrụ a na -enye ohere soro otu enyi nwee ọtutu aha na aha nkwado ma hapụ enyi ọzọ ka ọ kpọọ aha nke naanị anyị rụnyere, ọbụlagodi na o nweghị egwuregwu ahụ.
Ọ bụghị egwuregwu niile chọrọ PlayStation Plus
Tupu ịkọwa usoro na -enye anyị ohere ịnụ ụtọ PlayStation Plus n'efu, ị kwesịrị iburu n'uche nke ahụ ọ bụghị egwuregwu niile chọrọ ndenye aha a ka igwu egwu.
Aha dị ka Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Mmetụta Genshin, Warframe, Dauntless, Brawlhalla, na oku nke ọrụ: Warzone Ha bụ egwuregwu na-achọghị PlayStation Plus ka gị na ndị ọrụ ndị ọzọ nwee ike igwu egwu. Ndị mmepe egwuregwu a na-akwụ Sony ụgwọ ka ndị ọrụ nwee ike igwu egwu na-akwụghị ụgwọ ndenye aha Sony na-enye anyị.
Agbanyeghị, egwuregwu ndị ọzọ, ọkachasị ndị na -emekọrịta ihe, chọrọ ndenye aha a, yabụ tupu i jiri aghụghọ a mee ihe, ị ga -agba mbọ hụ na ikekwe ọ dịghị mkpa iji ya.
GTA V, PUBG, FIFA 2021, Minecraft bụ ụfọdụ aha chọrọ, ee ma ọ bụ ee, ndenye aha na Sony's PlayStation Plus. Site na ego ụlọ ọrụ ndị a na -ewepụta, ha nwere ike inye nsogbu ma kwụọ Sony ụgwọ dị ka egwuregwu Epic (Fortnite, Rocket League) na Activision na -eme ịkpọ aha ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama, ka ndị ọrụ ghara ịkwụ ụgwọ ọzọ iji nwee ọ enjoyụ ahụmịhe ọtụtụ mmadụ.
Ọrụ CrossPlay (inwe ike igwu egwu n'etiti nyiwe dị iche iche) bụ ọrụ ọzọ Sony na -ekwusi ike na ndị nrụpụta chaja, ịkwụ ụgwọ nke Microsoft anaghị achọ n'aka Xbox.
Ihe doro anya bụ na Sony chọrọ ime ka ikpo okwu ya kacha mma n'ụzọ, mgbe ụfọdụ ekwubigaghị okwu ókè, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ụfọdụ ndị ọrụ na -achọ ụzọ ha ga -esi nwee PlayStation Plus n'efu.
Ụbọchị 14 nke PlayStation Plus n'efu na ruo mgbe ebighi ebi
Emere iwu mere ọnyà. Mgbe anyị mepụtara akaụntụ PlayStation, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ, ka anyị nwee ike mepee ọtụtụ akaụntụ dịka anyị chọrọ. na -ejighị kaadị kredit, akaụntụ PayPal ...
Oge ọ bụla onye ọrụ mepụtara akaụntụ ọhụrụ, Sony na -enye ụbọchị 14 nke PlayStation Plus n'efu. Na nke a, ọ bụrụ na anyị chọrọ nwee PlayStation Plus n'efu na ruo mgbe ebighi ebiNaanị anyị ga -emepụta akaụntụ ọhụrụ maka ụbọchị 14.
Sony na -eji adreesị akaụntụ ahụ gosi na email ahụ dị adị na, na mberede, ziga mgbasa ozi gbasara akụkọ ruru ụlọ ahịa ngwa PlayStation. Naanị email nke anyị nwere mmasị ịnata bụ email nkwenye ozugbo anyị mepere akaụntụ ahụ, enwere ike idobe ozi ịntanetị.
Iji kwado email nkwenye mbụ mgbe anyị mepụtara akaụntụ, ihe kacha mma anyị nwere ike ime bụ jiri akaụntụ email nwa oge. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmepụta akaụntụ na -adịghị agwụ agwụ kwa ụbọchị 14.
Nyiwepụta iji mepụta ozi nwa oge maka PS4 / PS5
Ntọala niile na -enye anyị ohere ịmepụta akaụntụ ha achọghị data anyị ọ bụla, anyị ga -ede aha email anyị chọrọ iji.
Akaụntụ email ndị a ha enweghị paswọọdụ, ka onye ọ bụla nwere ohere na akaụntụ email gị nwee ike nweta ọdịnaya ya. A na-emechi akaụntụ ndị a na-akpaghị aka n'ime ụbọchị 5-10.
YoPmail Ọ bụ otu n'ime ama ama na ama ama kachasị eji eme ihe n'etiti ndị ọrụ na -eji akaụntụ email nwa oge. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịmepụta akaụntụ email @ yopmail.com, kamakwa ọ na -enyekwa anyị ohere iji ngalaba:
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na Sony anaghị ekwe ka anyị jiri yopmail, anyị nwere ike iji ngalaba ndị ọzọ dị n'elu ikpo okwu a mepụta ozi ịntanetị nwa oge.
Ebe ikpo okwu ọzọ na -atọ ụtọ ịmepụta akaụntụ email nwa oge iji jiri PlayStation Plus n'efu bụ Maildrive. Nke a bụ otu n'ime karịa ndị agha ochie n'ụwa a, yabụ na ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ ikpo okwu anaghị enye gị ohere iji ụdị email a @ maildrop.cc (n'oge ebipụta edemede a Sony ma ọ bụrụ na ọ nabata ha).
Ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nsogbu maka imepụta ozi ịntanetị nwa oge bụ Achụpụ, webụsaịtị a na -enye anyị ohere ịmepụta email nwa oge na sekọnd.
Ọ bụ ezie na YopMail bụ otu ama ama ma jiri ya mee ihe, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji obere nyiwe eji eme ihen'ihi na ha nwere ohere dị ala nke igbochi weebụsaịtị.
Gmail, Outlook na Yahoo abụghị ikpo okwu iji mepụta ozi ịntanetị nwa oge, mana ha bụ nhọrọ kachasị mma iji mepụta ozi ịntanetị nke ahụ anyị anaghị eme atụmatụ iji ya eme ihe mgbe niile.
Site na akaụntụ Gmail / Outlook na Yahoo anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe ị na -eke akaụntụ Sony. Ọ dị mma, usoro imepụta akaụntụ dị ntakịrị ma na -agwụ ike, mana n'ikpeazụ ọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na Sony na -egbochi ikpo okwu ndị ọzọ dịka a na -ewere ya na enweghị nchekwa.
Mgbe anyị mepụtara akaụntụ ọhụrụ na PlayStation iji nweta oge nnwale nnwere onwe ụbọchị iri na anọ, anyị na-eji aha ọhụrụ na akaụntụ email dị iche, yabụ ọganihu anyị nwere ike ịme n'egwuregwu anyị agaghị edebe ya. ọ gwụla ma aha ahụ jikọtara mmekọrịta ya na sava gị ọ bụghị site na PlayStation.
Nsogbu kachasị na aghụghọ a, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na -egwu egwuregwu egwuregwu, bụ na anyị ga -emerịrị ya gwa ndị enyi anyị ụbọchị iri na anọ nke aha njirimara ọhụrụ nke anyị na -eji oge nnwale nke PlayStation Plus.
Ọ gwụla ma ndị enyi anyị niile na -eme otu ihe n'ikpeazụ ọ nwere ike bụrụ nsogbu nye ndị enyi gị ọ bụrụ na ha gafere ndenye aha ebe ọ bụ na oge ga -agwụ ha ike ịgbakwunye onye ọrụ ọhụrụ kwa izu.
Nsogbu ọzọ anyị na -eche ihu n'iji akaụntụ email nwa oge bụ nke ahụ ụfọdụ nyiwe anaghị anabata ụdị ọrụ ozi a ịdebanye aha dịka a na -ewere ha dị ka ndị na -enweghị nchekwa, a na -amata ha dị ka bots ma ọ bụ na ha maara ozugbo na ọ bụ ikpo okwu email nwa oge.
Zụta ndebanye aha PlayStation Plus dị ọnụ ala
Zụta ndenye aha PlayStation Plus site na PlayStation ma ọ bụ site na webụsaịtị ya bụ ihe ikpeazụ anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ezigbo ego.
Ọnụ ego gọọmentị maka ndenye aha PlayStation Plus nke Sony bụ euro 60. Abụọ n'ime Amazon dị ka Onye na -egwu ndụ o Egwuregwu ozugbo site n'oge ruo n'oge anyị nwere ike ịchọta ego na -atọ ụtọ nke na -enye anyị ohere chekwaa n'etiti euro 15 na 20 na ndenye aha.
Mgbe ịzụrụ ndenye aha site na nyiwe ndị a, anyị na -enweta koodu anyị ga -abanye na PlayStation iji mee ka ndenye aha rụọ ọrụ maka oge anyị nyere ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi emepụta email nwa oge maka PS4 na PS5 wee nwee ọ Playụ PlayStation Plus n'efu
Kedu ihe kpatara na Snapchat anaghị arụ ọrụ? Ngwọta maka nsogbu a
Vinted ma ọ bụ Wallapop? Kedu ngwa kacha mma ịre akwa